Apple ma aqbali doonto cusbooneysiinta barnaamijyada loogu talagalay watchOS 1 SDK laga bilaabo sanadka soo socda | Waxaan ka socdaa mac
Sanadihii la soo dhaafay, Apple waxay si joogto ah ugu wargalinaysay dhammaan horumariyeyaasha baahida loo qabo in la cusbooneysiiyo barnaamijyadooda 32-bit ah si ay si buuxda ula jaanqaadaan processor-yada 64-bit, qaar ka mid ah processor-rada bilaabay in laga hirgeliyo boosteejada Apple sida Iphone 5s, tani waa tii ugu horreysay ee hirgelisa.
Imaatinka macruufka 11, dhammaan codsiyadaas oo aan la cusbooneysiin waa laga tagay, sidaa darteed mar dambe lama heli karo dhammaan boosteejooyinka la jaan qaadaya macruufka 11. Waxay u muuqataa in tallaabada xigta ee Apple ay ku bilaabi doonto nadiifinta App Store ay saameyn ku yeelanayso. codsiyada la jaan qaada watchOS 1, nooca koowaad ee nidaamka hawlgalka Apple Watch.
On the Apple ee Developer Portal, wuxuu ku boorinayaa dhammaan horumariyeyaasha sii daayay barnaamijyadooda iyadoo la sii daayo watchOS 1 ilaa cusbooneysii watchOS 4 si ay ula jaan qaado dhammaan moodooyinka Apple Watch oo ay hadda iibinayaan Apple, oo ay ku jiraan Apple Watch Series 3. Adoo cusbooneysiinaya codsiyada daawashada 4, horumariyeyaashu waxay ka faa'iideysan doonaan dhammaan dheecaanka iyo waxqabadka waxqabad ee lagu soo kordhiyay barxadda qaababkii ugu dambeeyay ee Apple ay ku sii deysay suuqa marka lagu daro kordhinta xadka dalabka oo laga dhigay 50 ilaa 75 MB.
Apple waxay sii wadi doontaa inay aqbasho cusbooneysiinta noocyada barnaamijyada illaa Abriil 1, 2018-ka, Maalinta nacasyada bisha Abriil ee Ameerika. Laga bilaabo Abriil 2, Apple mar dambe ma aqbali doonto codsiyada doonaya inay cusbooneysiiyaan ama lagu sameeyay watchOS 1 SDK. Cusboonaysiinta waa in lagu sameeyaa watchOS 2 SDK ama ka dib. Haddii ay tahay codsi cusub, waa inay soo saartay watchOS 4 SDK ama goor dambe.
Apple hadda waxay horumarinaysaa watchOS 4.2 kaas oo ku jira beta-kii saddexaad, oo nuqulkiisii ​​ugu dambeeyay loo qorsheeyay in la sii daayo ka hor dhammaadka sannadkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple ma aqbali doonto cusbooneysiinta barnaamijyada loogu talagalay watchOS 1 SDK laga bilaabo sanadka soo socda
Apple waxay ku bilaabaysaa ololeheeda Kirismaska ​​xulashooyinka hadiyadeed